Maxay tahay sababta la isugu khilaafay ”Dawada kordhisa dareenka dumarka” Akhriso sir la helay - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
Maxay tahay sababta la isugu khilaafay ”Dawada kordhisa dareenka dumarka” Akhriso sir la helay
Jul 19, 2019 - Comments off
Dumarka Mareykanka ayaa hadda heli loo diyaariyay qaabka kordhinta rabitaan ka dib markii loo sameeyay “dawo sare u qaadeysa dareenkooda”.
Warkan ka soo baxay Maamulka Cuntada iyo Dawada Mareykanka (FDA), oo ah guddiga ugu sareeya arrimaha caafimaadka bulshada, ayaa ansixiyay Vyleesi. Markii hore waxaa loo arkayay guul laga gaaray dhanka xoojinta dareenka dumarka oo caafimaad leh.
Balse Isbuucyo ka dib, waxaa soo baxaya dood adag oo la xiriirta xaladda dawada marka uu dareenka aad u bato ayna adkaato inuu caadi noqdo.
Dawada waxaa loo yaqaanaa bremelanotide, waxayna ku asteysan tahay magaca ah Vyleesi marka la iibsanayo.
Waxaa si isku mid ah u isticmaali kara gabdhaha iyo haweenka da’da ah – kuwaas oo aan lagu arkin astaamaha muujinya in caadada ay ku dhici rabto ama ay ku dhacday – iyo kuwa ay dhibaatada ka haysato dhanka rabitaanka galmada ee loo yaqaano (HSDD).
Dhaqaatiirta waxay ku qeexeen in qof dumar ah ay si joogto ah u diido la seexashada ninkeeda. Waxaa lagu qiyaasaa in boqolkiiba 6 illaa 10 ee dumarka weli ku jira da’da dhalmada in ay dhibaato noocaas ah haysato.
Waa markii labaad oo dhaqaatiirtu isku deyaan in ay soo saaraan “Viagra dumarka isticmaali karaan”. Khilaaf iyo muran ayaana ka dhashay in FDA ay aqbasho dawadaas iyadoo dhaqaatiirta qaar ay shaki ka muujiyeen waxtarkeeda. Waxay sheegeen in halis caafimaad ay la kulmayaan dumarka isticmaala dawada?
Haddaba, bremelanotide maxay soo kordhisaa? Maxayna yihiin dhibaatooyiinka caafimaad ee ka dhalan kara?
Cirbadaha iyo Kaniiniga
Image captionDawada waa cirbad la isku duro
Vyleesi – Waxaa la sameeyay iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda Palatin, waxaana la fasaxay in dawo ahaan loo adeegsado – Waxay ka sameysan tahay cirbad uu qofka isku duri karo.
Ujeedada waxay tahay in dumarka laga yareeyo xanaaqa badan, ayna yeeshaan dareen raaxo. Waxay xakameyneysaa heerarka waxyaabaha maskaxda ka soo baxa sida: Joogteynta qalbi rabitaan leh iyo ka saaridda waxyaabaha keena xanaaqa.
Dawadan waxay la tartameysaa Addyi – waa mid horey loo soo saaray oo ah kaniin la qaato maalin kasta taas oo ay ansixisay FDA, sannadkii 2015kii.
Go’aankaas xitaa wuxuu dhaliyay muran iyadoo khubarada ay sheegeen in Addyi aysan “lahayn waxtar” ayna halis ka dhalan karto.
Dhibaato lala aamuso
Image captionWaxaa la qeiyaasayaa in boqolkiiba 10 dumarka aysan yeelan dareen xilliga ay nin la seexanayaan
Sida lagu xusay cilmi-baaris la sameeyay 2016-kii, dhibatada HSDD waxa la kulma mid ka mid ah 10kii dumar ee Mareykanka ku nool, badankoodana weligood ma aysan raadsan dawo.
“Kuwa badan oo ka mid ah dumarkaas waxay la aamuseen dhibaatada haysata, taas micneheedu wuxuu yahay in dawadan aysan suuq haysan,” sida uu sheegay William Heiden, Agaasimada Fulinta ee Amag Pharmaceuticals.
Balse khubarada warshadeynta waxay qiyaasayaan in dhaqaalaha ka soo xarooda Vyleesi sannadkii uu gaari doono $1 Bilyan oo dollar.
Image captionQaar ka mid ah sababaha lala xiriirinayo HSDD waxaa ka mid ah caadada ka hor iyo walbahaarka badan
Amag Pharmaceuticals waxay sheegeen in saameynta ka dhalata dawan, ee la ogaaday xilligii tijaabada, ay ka mid tahay lalabo qabatay boqolkiiba 40% dumarkii isticmalay. Waxaa kaloo ka mid ah dareen aan dhammaan iyo madax-xanuun.
FDA waxay dawada cusub ku amaantay “in dumarka ay u tahay bedelka dawo kale” oo la xiriirta HSDD.
“Waxaa jiro dumar, oo aan la ogeyn sababta ay u yaraatay rabitaankooda galmo, taas oo sababi karta walbahaar,” ayey tiri FDA.
Balse waxay qirtay in aysan kala cadeyn in Vyleesi ay ku shaqeyneyso maskaxda si ay u kordhiso rabitaanka iyo hakinta walwalka.
Qaar ka mid ah ururada u dooda caafimaadka dumarka waxay sheegayaan in FDA aysan u baahan baaritaan dheeraad ah oo la xiriira saameynta caafimaadka muddada fog ee Vyleesi.
“Warka wanaagsan wuxuu yahay in (Vyleesi) aan loo baahneyn in la isticmaalo maalin kasta sida Addyi,” sida ay Diana Zuckerman, madaxweynaha xarunta baaritaanka cafimaad, u sheegtay Washington Post.
“Warka xunna wuxuu yahay in bulshada aysan ku kalsooneyn dawada sababtoo ah ma ogin dhibaatada caafimaad ee ka dhalan karta mustaqbalka,” Ayey hadalka ku dartay Zuckerman.
Tijaabada caafimaad ee Vyleesi waxay socotay 24 isbuuc, waxaana ka qeybgalay 1,200 oo ah dumar ay dhibaato ka haysatay rabitaan nin.
Bukaanada ugu badan waxay dawada isticmaaleen laba illaa seddax jeer bishii, mana aysan ka badsan hal mar isbuucii.